जसले दु:ख पचाउँछ ऊ नै शक्तिशाली मानिस हो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
साहित्य, संगीत र कलालाई दलगत हिसाबले बाँडफाँड गर्न नहुने मदन चित्रकारको भनाइ सही लाग्यो (कथा कला र कलाकारको) । हाम्रो देशमा जुनसुकै विषयमा राजनीति मिसाएर थिलथिलो बनाइएको छ । कला–साहित्य जहिले पनि राष्ट्रको हुन्छ र कलाकार तथा साहित्यकार राष्ट्रका गहना हुन् भन्ने सबैले बुझनु जरुरी छ ।
एवार्ड प्राप्त गर्ने सबैलाई बधाई तथा शुभकामना (कामना एवार्डमा लिलिबिलीको वर्चस्व) ।
हिँड्दै छ पाइला मेट्दैछ भन्ने उखान चलचित्र क्षेत्रमा पनि साकार हुँदो रहेछ । एवार्ड (बिर्सने प्रतिस्पर्धा) पाउँदा पनि सँगै काम गरेका कलाकारहरूबीच खुसी नसाटिनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
साहित्य उत्सवले नयाँ साहित्यकारहरूलाई स्थान दिन सक्नुपर्छ । (पोखरामा साहित्य उत्सव) यस्ता महोत्सव कर्मकाण्डी मात्र साबित नहुन् ।
अन्तराष्ट्रिय धार्मिक स्थानहरूमा निर्मित ठूला होटलहरू भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि सहयोगी हुनेछन् (लुम्बिनीका पाँच रिसोर्ट) । लुम्बिनीमा मात्र होइन, सरकारले छुट्याएका १ सय पर्यटकीय स्थलमा पनि यस्ता होटल खुल्दै जानुपर्छ ।
हैट ! विवाह (थिम वेडिङ) पनि कति महँगो भएको हो ? २० लाख लाग्ने रे विवाह गर्न । अब त कोर्ट म्यारिज गर्नुपर्ला जस्तो छ ।
क्रिकेटको क्रेजसँगै खेलाडीहरूको आम्दानी पनि राम्रो हुन थालेको छ (कस्ता छन् इपिएल २०१८ का टिम ?) । अहिले जसरी धमाधम क्रिकेट प्रतियोगिता भैरहेका छन् फुटबलको पनि यस्तै प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
म नम्रताको साहसको प्रशंसा गर्छु (डिप्रेसनबाट तङ्ग्रिँदै) । वास्तममा उनी बलियो ह्दय भएकी महिला हुन् । जसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूलाइ सम्हाल्छ, ऊ सराहनाको भागिदार हुन्छ ।
नम्रताजी, तपाईंमा ठूलो आत्मबल छ । जसले दु:ख पचाउँछ ऊ नै शक्तिशाली मानिस हो ।
श्रृंखला खडिवडा प्राकृतिक सौन्दर्यका साथमा राम्रो इच्छाशक्ति भएकी युवती हुन् । कठोर मेहनत अनि क्षमता र दक्षताका कारण उनी आफ्नो अलग स्थान बनाउन सफल छिन् । (मिस वल्र्डमा नेपालको उत्कृष्ठ दावेदारी) भोलिका दिनमा उनले नेपालको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
नेपालमा खाजाका रूपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने म:मका बारेमा यथेष्ट जानकारी पाइयो (म:म ब्रान्ड) । म र मजस्तै अरू म:म पारखीलाई कुन ठाउँमा कुन खालको म:म पाइन्छ भनेर भौंतारिने बाध्यताबाट छुट्कारा दिएकोमा साप्ताहिकलाई हार्दिक धन्यवाद ।
नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बसेर पनि नेपाली साहित्यलाई उत्तिकै माया गर्नुहुनेहरूलाई नमन छ (नेपालबाहिर बसेर साहित्य सिर्जना) ।
पक्कै पनि पहिले हामी मान्छे हौं । (सीताराम हाछेथूको अन्तर्वार्ता) त्यसपछि सामाजिक प्राणी, अनि एउटा राष्ट्रिप्रेमी, अनि राष्ट्रि सेवक । आफ्नो कार्यकालमा यहाँले जति काम गर्न सक्नुभयो त्यसका लागि साधुवाद ।
साप्ताहिक र मध्यपृष्ठ (ब्लोअप) एक–अर्काका पूरक हुन् । यसपटक प्रकाशित रुविष्का श्रेष्ठको तस्विर उत्कृष्ठ छ । पहिले मध्यपृष्ठमा मोडलको तस्बिरसँगै उनीहरूको विषयमा पनि जानकारी हुन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । त्यसबाट मोडलहरूका बारेमा जानकारी पाइन्थ्यो ।